प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, अरुका छोराछोरी बेच्न राखिएका पुतली हुन्, जे गरेपनि हुने ?
Thursday, 21 Jan, 2021 4:56 PM
काठमाडौं, ८ माघ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका सबै केटाकेटी आफ्ना सन्तान भएको बताउनुभएको छ । विहिबार प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रचण्डले आफ्ना सन्तान नभएको विषयमा दिएको अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘केपीका छोराछोरी छैनन्, मेरा त छोरी छन् ज्वाइँ छन् हेर्नै पर्‍यो । छोरीलाई मेयर बनाउनै पर्‍यो, मतले नपुगे मतपत्र च्यात्नै पर्‍यो । ज्वाइँलाई घरघडेरी किन्दिनै पर्‍यो । मेरा त सन्तान छन् दिन्छु भनेछन् एकजनाले । गज्जब बहादुर हो । ससुरो होस् त्यस्तो बाबु होस् त्यस्तो ।’उहाँले आफुलाई आफ्ना छोराछोरी नभएपनि हर्ष बिस्मात केही नहुने बताउँदै सारा देशका केटाकेटी आफ्नै सन्तान भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भाबुक हुँदै भन्नुभयो, ‘मलाई त सन्चै छ । उहाँलाई त्यो ठाँउमा पुर्याउने योद्धाहरुका छोराछोरी, आफन्त हरु छन कि छैनन ? आफ्ना छोराछोरी विदेश राख्ने जनताका छोराछोरीलाई लड्न लगाउने ?” उहाँले थप्नुभयो, “अरुका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन, हातखुट्टा हुन भनेर नसोच्ने ? के त्यो काठको बनाएको हो र ? भाँचेपनि हुने, फुटाएपनि हुने जे गरेपनि हुने ? अरुका छोराछोरी बेच्न राखिएका पुतली हुन् ? त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको ” ? तीनीहरुको अवस्था के छ, त्यो मतलब छैन, मेरा त छोराछोरी छन् हेर्नपर्छ ? देश बनाउन भनेर हिँडेका जस्लाई होमियो तीनका सन्तानलाई हेर्न पर्छ कि पदैन ?